Rubber Zvinhu Zvekushandisa Base - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd.
Chengda Rubber & Plastiki ine zvakapfuma zviitiko mune silicone uye yerabha zvinhu kusarudzwa uye kusimudzira, isu tinogona kukurudzira iyo chaiyo silicone uye yerabha zvinhu kana kukudziridza tsika yerabha fomura yako iwe maererano neyako chaiyo zvaunoda, iyo yerabha zvinhu kusarudzwa kwaizogadzika pane yakanakisa mutengo-unoshanda. , kuzadzisa kukosha kwekuwedzera kwemapurojekiti.
Kune akawanda akasiyana maficha uye zvivakwa zvesilic uye rabha zvinhu, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mune akasiyana zvigadzirwa uye nharaunda. Semuyenzaniso: Tine chikafu giredhi silicone zvinhu, zvekurapa giredhi silicone zvinhu, conductive silicone zvinhu, yakakwira elastic zvinhu, kupisa nemishonga zvinhu, murazvo retardant zvinhu nezvimwewo uye isu zvakare tine EPDM, NBR ..rubber zvinhu. Tinogona kuwana nekushandisa izvo zvakanaka zvinhu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Chengda Rubber & Plastiki yakagadzirirwa nesilicone inosanganisa muchina uye yerabha yekuvhenganisa muchina, guruva-chiratidzo silicone yekusanganisa kamuri, uye vane ruzivo vashandi kuti vape yakanaka yekuita rabha uye silicone zvinhu kune yedu yerabha kuumba musangano. .
Chengda Rubber & Plastiki yakavaka kubatana kwakasimba uye kwenguva refu kudyidzana neinotungamira yerabha makomputa fekitori uyo ane ruzivo ruzivo uye kugona kugona kwehunyanzvi, tinogona kukudziridza tsika yerabha mafomati sekuenderana nevatengi 'zvakadzama zvinodiwa mune pfupi nguva.